Amaqhosha amahlanu akhutshwe kumthamo wokugaya abantu | Ezezimali
Ivenkile yentengiso yaseSpain kuthengiswe i-41.407 yezigidi zeerandi ngoJanuwari, emele i-6,8% ngaphezulu kwenyanga ephelileyo kunye neyona nyanga ibalaseleyo ukusukela ngo-Okthobha, nangona i-18,6% ingaphantsi kunoJanuwari 2018. Kwelinye icala, inani lothethathethwano belimi ngeli xesha ngezigidi ezi-3,6, a I-15% ngaphezulu kwenyanga ephelileyo. Ezi ziidatha ezibonisa ukuthandwa kakhulu kweemarike zokulingana phakathi kwabatyali mali. Okuninzi ngakumbi xa kunokwenzeka, xa ingeniso esisigxina ikwizinga eliphantsi kunye nenzuzo engadluli kwinqanaba le-0,75%.
Ewe, ngaphaya kwale datha ifanelekileyo, umthamo weekhontrakthi unokuba ngumqondiso malunga nesicwangciso ekufuneka sisetyenziswe ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngokukodwa ukwenza imisebenzi yokuthenga okanye yokuthengisa. Kuba, eneneni, umthamo wokugaya inani yokuthenga nokuthengisa okuvaliweyo kwisithuba sexesha elinikiweyo. Kule meko, kuqhutywa kwiimarike ze-equity kwaye ekugqibeleni zichonge imeko yokwenyani yeemarike zezemali. Ngandlela thile.
Olu lwazi lunokubaluleka kakhulu phuhlisa nasiphi na isicwangciso kutyalo-mali. Ngaphandle kothotho lokuqwalaselwa kobuchwephesha nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko sexabiso lemarike yemasheya. Akukho nto ilunge ngakumbi kunokufezekisa ezona njongo zethu zingxamisekileyo kunokuba sazi ulwazi olunokusinika umthamo ophakamileyo okanye osezantsi wokugaya abantu. Kwaye oko kungasinceda ukuba sicwangcise kwaye senze ukonga okunenzuzo kunye neziqinisekiso ezinkulu zempumelelo. Njengoko izakuboniswa ngala manyathelo alandelayo esiya kukuveza ngezantsi.
1 Umthamo wokurhweba: umkhwa
2 Ukomeleza iintshukumo
3 Umthamo ophantsi, uthembeke kancinci
4 Iinyani zeshishini
5 Ukunqongophala komdla kwicala labatyali mali
6 Utshintsho kumjikelo weshishini
Umthamo wokurhweba: umkhwa
Ukuba umthamo ophakamileyo okanye ophantsi wobhaliso uyafezekiswa ngokubhekisele kwiiseshoni zangaphambili zorhwebo, oko kwenza ukuba Ukuqinisekiswa kwendlela yentengiso yesitokhwe. Zombini kwiimeko ezinyusayo kunye nezibambekayo. Apho inyani yokuba zibetha kakhulu ziyonyuka kuthethathethwano kwaye zichaphazela ukumiselwa kwamaxabiso zibaluleke ngokukodwa. Ewe, xa oku kusenzeka, sijamelene notshintsho kwindlela esihamba ngayo. Nokuba kukwi-bullish ukuya kwi-bearish okanye ngokuchaseneyo, kuxhomekeke kwiimeko zeemarike zezabelo. Ukuya kwinqanaba lokuba inokuba sisixhobo esinamandla sokuvula okanye sokungaguquguquki kwizikhundla kumaxabiso achaphazelekayo.
Kwelinye icala, xa kukho umahluko omkhulu kutshintshiselwano ngezokhuseleko, ingangumqondiso ocacileyo wokuba ukuqhubeka kwindlela elawula de kube lelo xesha. Kuqhelekile ukuba yenzeke kwixabiso elikhulu leemarike zezabelo. Kodwa kukho into ebaluleke kakhulu kwaye oko kukuthi akukho zihlala ziphosakele kubunzulu obukhulu ekuchongeni ezi ntshukumo kwimarike yemasheya. Ngokuchasene noko, zithembekile kwaye azidingi amava akhethekileyo ukuze zikwazi ukuzibona kwangexesha. Kungenxa yokuba zihlala zisenzeka xa sele sikhuselekile kwiphothifoliyo yethu yotyalo-mali.
Umthamo ophantsi, uthembeke kancinci
Elinye lamaqhinga esinokuthi silisebenzise apha ngezantsi lelo linento yokwenza nokuqina kwezi ntshukumo. Kungenxa yokuba umthamo wekhontrakthi umncinci kakhulu, oko kuthetha ukuba amaxabiso okanye ukuxabiseka kwamaxabiso kunjalo isekwe kakubi. Ngamanye amagama, akufuneki sinike ingqalelo ekhethekileyo kwezi ntshukumo kwiimarike zezabelo. Ukuthembeka kwayo, ke, kuya kuba yinto engekhoyo kwaye asizukukhetha ngaphandle kokulinda ukujonga impendulo yezenzo.
Esinye isiganeko esinokuvelisa utshintsho kumthamo wokuqesha kukuba iziganeko ezifanelekileyo ziyaqhubeka kwinkampani edwelisiweyo. Kude kube kuyahluka ngakumbi nangaphezulu kokuncipha ukutshintshiselana ngesihloko kwiimarike zezabelo. Ungathandabuzi nangaliphi na ixesha ukuba banokukunika ngaphezulu kwesiginali enye malunga nento ekufuneka uyenzile ukusukela kuloo mzuzu ukuya phambili. Zombini ngengqondo enye okanye enye, kwaye ke inokukunika umqondiso onamandla wokuvula okanye wokurhoxisa izikhundla kukhuseleko olwenziweyo. Ukongeza, sisicwangciso esibonelela ngokuthembekileyo kwisisombululo sayo.
Ukunqongophala komdla kwicala labatyali mali
Kwelinye icala, uthethathethwano olubuthathaka kwizihloko zalo luthetha ukuba ukhuseleko alunandiphi ukuzithemba kweearhente ezahlukeneyo zezemali kwaye phakathi kwazo abatyali zimali babandakanywayo. Ngale ndlela, unokujonga ngokulula ukuba zithini ixabiso lentengiso yemasheya uninzi lwentengiso kwiimarike zezabelo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye nangayiphi na imeko banokukunceda ukuhambisa utyalomali lwakho ukusukela ngoku. Ikwayinkqubo ebonelela ngokhuseleko olukhulu malunga neziphumo ezinokuthi zivele ngeendlela zakho zotyalo-mali.
Utshintsho kumjikelo weshishini
Enye yeemeko apho utshintsho kwi ivolumu yokurhweba kuxa kukho utshintsho kumjikelo wezoqoqosho lwamanye amazwe. Ngokubanzi ngokonyuka okufanayo kwaye oko kunokukunika nolunye ulwazi malunga nento ekufuneka uyenzile kutyalo-mali lwakho. Nangona kunjalo, yinkqubo entsonkothileyo efuna ukuqhubeka nokufunda ekuchongeni ezi ntshukumo kwiimarike zezabelo.
Njengoko ubunakho, umthamo weekhontrakthi ungaphezulu kokutshintshiselana nje kukhuseleko okanye kwiiasethi zemali. Kwaye apho unokufumana khona ulwazi olubalulekileyo malunga neenkampani ukuze ukwazi thenga okanye uthengise izabelo zakho ngomzuzwana othile. Ngale ndlela unokwenza imisebenzi yakho kwimarike yemasheya ibe nenzuzo ngaphezulu kwezinye izinto.
Ezi zinto zinokukunceda usebenze utyalo-mali lwakho ngempumelelo ethile ukusukela ngoku. Ngendlela elula kwaye enokuhlengahlengiswa kwiimodeli zakho zolawulo, nokuba yeyiphi na imeko okanye iinkqubo. Oko kukuthi, emva kwayo yonke loo nto, imalunga nantoni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amaqhosha amahlanu akhutshwe kumthamo wesivumelwano